Dowladda Jaban oo dhaqaale ku bixineysa ka hortagga Qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho – Walaal24 Newss
Dowladda Jaban oo dhaqaale ku bixineysa ka hortagga Qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho
Safaaradda Dowladda Jaban ay ku leedahay dalka Kenya ayaa sheegtay inay ku bixinayso la dagaalanka xadgudubyada ay kooxda xaq jirka shabaab ka geystaan Siomaaliya, dhaqaale gaaraya Hal Milyan oo Doollar, Dowladooda.
Safaaradu, waxay ku sheegtay Bayaan ay arrinta ka soo saartay inay kaalmadan lacageed ay Dowladda Jaban u soo marin doonto Soomaaliya Sanduuqa Qaraamada Midoobay ee u qaabilsan la dagaalanka khatarta miinooyinka, taasoo ujeedada laga leeyahay ay tahay in Soomaaliya laga dhigo dal ay nabad gelyo buuxda ka jirto.
Baayaankaasi waxaa lagu sheegay in Dowladda Jaban ay shantii sanadood ee la soo dhaafay ay uga qeyb qaadatay sugidda amniga Soomaaliya lacag dhan 7.3 milyan oo Doollar, si looga hortago Waxyeelada Qaraxyada.
Bayaankaa ay soo saartay Safaaradda Jaban ee magaalaqda Nairobi waxaa kaloo lagu sheegay inay sii wadi ddoonto la daagaalanka kooxaha xaqajirka ah iyo in Somalia ay noqoto dal nabadeed oo xagga bulshada ka hormarsan.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta furaya kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka
Madaxweynaha maamulka Puntland oo u ambabaxay Dalka Itoobiya
Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada oo Muqdisho ka Furay Shirkii Machadka Cilmi baarista Soomaaliyeed
Wasaaradda arrimaha gudaha oo war kasoo saartay siyaasadda aqoonsiga iyo diiwaangelinta Dadweynaha
Daawo: Xildhiban Prof Ibbi oo jawab ka bixiyay hadal ka soo yeray mid ka mid ah Xildhibanada Barlamanka